मिली ३६ ~ मत्ती, मार्क, लूका, जन, प्रेरित, रोमी, १ कोरिन्थी, २ कोरिन्थी, गलाती, एफिसी, फिलिप्पी, कलस्सी, १ थिस्सलोनिकी, २ थिस्सलोनिकी, १ तिमोथी, २ तिमोथी, तीतस, फिलेमोन, हिब्रू, जेम्स, १ पत्रुस, २ पत्रुस, १ यूहन्ना, २ यूहन्ना, ३ यूहन्ना, यहूदा, प्रकाश
अब येशू ख्रीष्‍टको जन्‍म यसरी भयो— उहाँकी आमा मरियमको योसेफसँग विवाह हुने कुरा छिनिसकेको थियो। उनीहरूको विवाह हुनुभन्दा पहिले नै मरियम पवित्र आत्‍माबाट गर्भवती भएकी थिइन्।
योसेफ निद्राबाट बिउँझे र स्‍वर्गदूतले सपनामा भनेका कुरा मानेर मरियमलाई विवाह गरी आफूकहाँ ल्‍याए।
येशूले जवाफ दिनुभयो, “के विवाहको भोजमा दुलहा तिनीहरूसित छउञ्‍जेल जन्‍तीहरूले विलाप गरेर उपवास बस्‍छन् र? तर त्‍यस्‍ता दिनहरू पनि आउनेछन्, जब दुलहालाई तिनीहरूबाट छुट्‌याइनेछ, तब पो तिनीहरू उपवास बस्‍नेछन्।
“परमेश्‍वरको राज्‍य त आफ्‍नो छोराको विवाहमा निम्‍तारुहरूलाई भोज खुवाउन बोलाउने एउटा राजासँग दाँज्‍न सकिन्‍छ।
“त्‍यसपछि तिनले नोकरहरूलाई फेरि भने, ‘विवाहको भोज त तयार छ, तर मैले निम्‍त्‍याएकाहरूचाहिँ यो भोज खान लायकका रहेनछन्।
राजाले तिनलाई सोधे, ‘ए मित्र! तिमी विवाहको लुगै नलगाईकन कसरी भित्र पस्‍यौ?’ तर ती मानिसले केही पनि जवाफ दिन सकेनन्।
“अनि ती मूर्ख कन्‍याहरू तेल किन्‍न जाँदा दुलहा आइपुगिहाले। तयार भएर बसेका पाँच वटी बुद्धिमती कन्‍याहरूचाहिँ दुलहाको साथमा विवाहको भोज मनाउन भित्र पसे र ढोका पनि बन्‍द भयो।
येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो, “के विवाहमा डाकिएका जन्‍तीहरू भोज नखाईकन जान्‍छन् र? दुलहासँग हुँदा त कोही पनि भोकै बस्‍दैनन् नि!
अब एक समयमा सात जना दाजुभाइहरू थिए। जेठो दाजुले विवाह गर्‍यो, तर ऊ छोरा-छोरी नभईकनै मर्‍यो।
येशूले जवाफ दिनुभयो, “तिमीहरू विवाहको भोजमा दुलहासँग आउने जन्‍तीहरूलाई केही खानै नदिई पठाउँछौ र?
तिमीहरू विवाहको भोजबाट फर्कने मालिकको बाटो हेरिरहने नोकरहरूजस्‍ता होओ। मालिक आएर ढोका ढकढक्‍याउँने बित्तिकै उनीहरूले ढोका खोलिदिन्‍छन्।
“तिमीहरू कसैको विवाहमा जाँदा मुख्‍य ठाउँ छानेर नबस। तिमीहरूभन्दा कोही ठूलो मानिसलाई पनि निम्‍तो होला।
बरु विवाहमा जाँदा पछिल्‍तिर गएर बस र निम्‍त्‍याउने आएर तिमीलाई ‘भित्र आउनुहोस्, माथि पाल्‍नुहोस्’ भनेर मुख्‍य ठाउँमा बसाउला। त्‍यस बेला सबैको सामुन्‍ने तिम्रो ठूलो इज्‍जत हुनेछ
तेस्रोले भन्‍यो, ‘मैले भर्खरै मात्र विवाह गरेको छु। त्‍यसकारण म आउन सक्‍दिनँ।’
अब एक समयमा सात जना दाजुभाइहरू थिए। जेठो दाजुले विवाह गर्‍यो। तर ऊ छोरा-छोरी नभई मर्‍यो।
येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्‍नुभयो, “यस संसारमा हुने मानिसहरूले विवाह गर्छन् अनि गराउँछन्।
पर्सिपल्‍टको कुरो हो। गालील क्षेत्रको काना सहरमा कुनै एउटा घरमा विवाह थियो। येशूकी आमा पनि त्‍यस विवाहमा गएकी थिइन्।
येशू र उहाँका चेलाहरू पनि त्‍यस विवाहमा निम्‍त्‍याइएका थिए।
विवाहमा दिने अङ्‌गुरको मद्य सकिएकोले येशूकी आमाले उहाँलाई भनिन्, “अङ्‌गुरको मद्य त सकिएछ!”
उनका चार वटी विवाह नभएका छोरीहरू थिए। तिनीहरूलाई अगमवाणी बोल्‍ने वरदान थियो।
बिहे गरेर बाँधिएका छौ? त्‍यसो हो भने छुट्टिने कोसिस नगर। बिहे नै गरेका छैनौ भने विवाहको बन्‍धनमा पर्न नखोज।
यस्‍तो देखरेख गर्ने मानिस कुनै दोषबिनाको हुनुपर्छ। उसले एउटै मात्र स्‍वास्‍नी विवाह गरेको हुनुपर्छ। ऊ आफैंलाई वशमा राख्‍ने, आफ्‍नो मनलाई अधीनमा राख्‍ने र राम्रो चालचलन भएको हुनुपर्छ। उसले अतिथिसत्‍कार गर्नुपर्छ र शिक्षा दिन सक्‍नुपर्छ।
यिनीहरूले विवाह गर्नुहुँदैन र कति कुराचाहिँ खानुहुँदैन भनेर मानिसहरूलाई सिकाउँछन्। तर विश्‍वास गर्ने र सत्‍यलाई चिन्‍नेहरूले धन्‍यवाद चढाएर यी खाने कुराहरू खानुहुन्‍छ किनभने परमेश्‍वरले नै यी कुरा सृष्‍टि गर्नुभएको हो।